Manamafy ny sandry ao an-trano
Mba hanifinify sy ho mafimafy ny hoza-tsandry dia ilaina ny mikolo azy matetika. Ireto misy fihetsika azonao atao na dia ao an-trano ihany aza hanamafisana azy :
Manala ny tavy manodidina ny valahana sy amin’ny sisin’ny lamosina
Hanampy anao hanala ny tavy amin’ny valahana sy ny sisin’ny lamosina ireto fampihetseham-batana manaraka ireto. Mila haltères izy ireo. Soloy tavoahangy feno rano fotsiny raha toa ka tsy manana izany ianao.
Manamafy ny fitombenana
Anisan’ny faritra mamoaka tsara ny toe-batana na ny bika maha vehivavy ny fitombenana ka tsara koloina sy hamafisina matetika izy io. Hanampy anao handrafitra io faritra io ireto fampihetseham-batana manaraka ireto :
Fihetsika tsotra ao an-trano, manafisaka ny kibo
Ireto fampihetseham-batana ireto atao raha te-hanala kibo. Ny tombon’izy ireo dia azonao atao tsara izy ireo na dia ao an-trano ihany aza :
Manala ny tavy amin’ny kibo sy ny andilana
Azonao atao tsara tokoa ny manala ny tavy manodidina valahana sy ny andilana amin’ny alalan’ireto fampihetseham-batana manaraka ireto. Mila “baton” na hazo lavalava fotsiny rehefa hanao azy. Averina in-15 avy ireo fihetsika atao isaky ny lafy dia manao andiany 3 amin’izany.
Raha niroraka noho ny fitondrana vohoka izy dia fantaro fa azo atao tsara ny mampiakatra azy amin’ny alalan’ny fampihetseham-batana. Hanampy anao amin’izany ireto manaraka ireto :
Sary 1 : Mijoro tsara dia avokona ny totohondry havanana. Atao eo ambanin’ny saoka. Tsindriana amin’ny saoka mandritra ny 5 segaondra ilay totohondry. Averina in-telo izay.
Sary 2 : Mijoro mahitsy tsara dia atao mifampitehaka manoloana ny tratra ny felan-tanana roa. Atao mifanosika mafy izy ireo mandritra ny 10 segaondra. Averina in-5 izay. Kendreo hahitsy tsara ny lamosina mandritra izany.
Sary 3 : Manao « pompes ». Ity no fomba mahomby indrindra manalehibe ny tratra. Raha mbola tsy zatra dia ny lohalika aloha itehenana amin’ny tany. Atao manalavitra ny vatana ny tanana, atambatra kosa ny tongotra. Atao im-polo ny andiany iray dia manao andiany telo.
Sary 4 : Matory amin’ny kibo indray eto. Akarina ambony ny tongotra sady aforitra ny lohalika. Takarina amin’ny tanana ny kitro. Tazonina mandritra ny 20 segaondra io paozy io dia miato 10 segaondra dia mamerina indray. Averina in-telo izay rehetra izay.
Atao matetika, in-droa na intelo isan-kerinandro mba hahita vokatra haingana.